के तपाइलाई ब्लड प्रेसर हाइ छ ? यसरी ख्याल गर्नुहोस् | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalके तपाइलाई ब्लड प्रेसर हाइ छ ? यसरी ख्याल गर्नुहोस्
Home स्वास्थ्य के तपाइलाई ब्लड प्रेसर हाइ छ ? यसरी ख्याल गर्नुहोस्
के तपाइलाई ब्लड प्रेसर हाइ छ ? यसरी ख्याल गर्नुहोस्
मुटुबाट रक्तसञ्चार हुने बेलामा रक्तनली (आर्टरी ) को भित्तामा पर्ने दबाबलाई रक्तचाप भनिन्छ। रक्तचापलाइ मिलिमिटर अफ मर्करीमा नापिन्छ। माथिको रक्तचापलाई सिस्टोलिक र तलको रक्तचापलाई डायस्टोलिक भनिनछ। सिस्टोलिक र डायस्टालिक दुबै रक्तचापशरीरको लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छन्।
सामान्य रक्तचाप १२०-८० एमएम एचजी भन्दा कम हुनुपर्छ। उच्च रक्तचाप भन्नाले माथिको रक्तचाप १४० वा सो भन्दा बढी भएको अवस्थालाई भनिन्छ। माथिको १२० देखि १३९ वा तलको ८० देखि ८९ सम्मको रक्तचापलाई प्रिहाइपरटेन्सन भनिन्छ। यो उच्च रक्तचापहुनु भन्दा अगाडिको अवस्था हो। प्रिहाइपरटेन्सन अवस्थामा रहेको व्यक्तिलाई सामान्य रक्तचाप भएको व्यक्ति भन्दा उच्च रक्तचाप हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले यस अवस्थामा जीवनशैलीमा आवश्यक परिवर्तन गरेर भविषयमा उच्च रक्तचापहुनबाट आफुलाई बचाउन सकिन्छ।
सामान्य भन्दा अली बढी रक्तचाप भयो भने के गर्ने?
यदि तपाइको रक्तचाप १४० -९० को वरिपरि छ र कहिलेकाहिँ १५०/१०० सम्म पनि पुग्छ भने, औषधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि जीवनशैलीमा परिवर्तन गरेर रक्तचापलाई घटाउन सकिन्छ र औषधिको आवश्यकता नपर्न पनि सक्छ । तर यदि तपाईंको रक्तचापमाथिको १४०–१५० वा तलको ९०–१०० (बोर्डरलाइन हाइपरटेन्सन)छ भने चिकित्सकसँग जाँच गराएर मात्रै औषधि खाने वा नखाने निणय गर्नुपर्छ । जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्दै ३ देखि ६ महिनासम्म रक्तचापलाई नियमित रुपमा जाँच गर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि रक्तचाप नियन्त्रण नभएमा औषधिको प्रयोग गर्नु पर्ने हुनसक्छ।
रक्तचाप नाप्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
कति दिनको फरकमा रक्तचाप नाप्ने भन्ने कुरा रिसर्चले स्पष्ट गरेको छैन । अध्ययन र अनुभवको आधारमा ,बिरामीलाई निम्नानुसार रक्तचाप नाप्न सल्लाह दिन्छु । रक्तचाप धेरै चााडो नाप्दा अनावश्यक पीर पर्ने हुनसक्छ । धेरै दिनको फरकमा नाप्यो भने रक्तचाप नियन्त्रणमा छ कि छैन थाहा नहुनसक्छ । त्यसैले एउटा निश्चित समयमा रक्तचापनाप्नु जरुरी हुन्छ । चाँडै आत्तिने अवस्थाका भएका व्यक्तिहरुले धेरै चाँडो रक्तचापनाप्दा झन आतिने र अर्थको चिन्ता हुनसक्छ।
गर्भावस्थामा रक्तचाप १४०-९० भन्दा बढी भयो भने औषधिको प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ।
गर्भावस्थामा आमा रशिशस दुवैलाई असर नगर्ने औषधि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ । गर्भावस्थामा उच्च रक्तचापनियमित रुपले जाँच्ने गर्नुपर्छ । कसै–कसैलाई गर्भावस्था पछि पनि रक्तचाप बढी भइराखेको हुनसक्छ, यसको लागि औषधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
अवस्था जीवनशैली नै उच्च रक्तचापको प्रमुख कारण हो । अवस्था आहार (नुनिलो खानेकुरा, मोटोपना र शारीरिक गतिबिधिको कमीले उच्च रक्तचापके सिर्जना गर्नसक्छ । जीवनशैलीमा हुने अस्वस्थ परिवर्तनले गर्दा नै युवकहरुमा पनि यो समस्या बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । धुम्रपानको सेवजले रक्तचापलाई बढाउँछ । यसले रक्तचाप कम गर्ने औषधिको असरलाई पनि कम वा निष्क्रिय गर्छ । जसले गर्दा रक्तचापको राम्रो नियन्त्रण हुन पाउँदैन।
सामान्यता उच्च रक्तचापको केहि लक्षण हुँदैन। उच्च रक्तचापको कारणले टाउको दुख्छ भन्ने जनधारणा छ तर यो कुरालाई अध्ययनले पुष्टि गर्दैन । रक्तचाप अचानक धेरै बढेमा टाउको दुख्न सक्छ । रक्तचाप अलि–अलि मात्र बढेमा टाउको दुख्दैन । तर, उच्च रक्तचापले टाउकोको पछाडितिर र कहिलेकाहिँ पूरै टाउको भारी हुने वा अलिअलि दुख्ने हुनसक्छ।
कसैकसैलाई रक्तचाप बढेको बेलामा केही लक्षण तथा समस्या देखा पर्न सक्छन् । कहिलेकाहिँ उच्च रक्तचापको कारणले अंगहरुमा परेको दुष्प्रभावको फलस्वरुप विभिन्न लक्षणहरु देखापर्न सक्छ। केही बिरामीलाई मष्तिकघात, ह्दयघात वा मिर्गौलाको समस्या आदि भएर अस्पताल पुगेपछि मात्र उच्च रक्तचाप भएको पहिलो पटक थाहा हुनसक्छ।
असोज १५ र १६ गते देशव्यापी रुपमा सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द हुने